လူမီနီယံတံခါး & Window
စက်မှုအလူမီနီယံ profile များကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့အဓိကအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်အပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝင်သည်. 1. ပုံသွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အကြမ်းအားဖြင့်လူမီနီယမ်သတ္တုစပ်များကိုပြုလုပ်ရန်နှင့်ဖွဲ့စည်းရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်: extrusion နှင့်လှိမ့. Extrusion သည်အလူမီနီယမ်သတ္တုကိုယ်ထည်အတွက်ဘုံပုံသွင်းခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ပထမ, အလူမီနီယံပရိုဖိုင်းမှိုပရိုဖိုင်းသည်နှင့်အညီလုပ်ဖြစ်ပါတယ် ...
လက်ရှိအချိန်မှာ, စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး တည်ချက်ကိုလုပ်ငန်းစက်ရုံများမှတဖြည်းဖြည်းအသုံးပြုသည်. စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများကိုဝယ်ယူသောအခါအဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်? 1. စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများအသုံးပြုခြင်းကိုလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းများရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည်. လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုဘောင်? လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကိုတူရိယာအဖုံး? လူမီနီယမ် ...
စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများသည်အားသာချက်များစွာရှိပြီးလူတို့၏ဘ ၀ တွင်ကြုံတွေ့ရသောပြproblemsနာများစွာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်. လူတိုင်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအသက်တာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်၌တည်၏, ဘာကြောင့်လဲ. တကယ်တော့, ဆောက်လုပ်ရေးအမျိုးမျိုး၏လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီစေရန်နှင့်…
အဆင့် 1: စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်မှုအလူမီနီယမ်အလွှာများသည် ၆ မီလီမီတာဖြစ်သည် (ဥရောပစံ). စက်မှုအလူမီနီယံသတ္တုကိုယ်ထည်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်မှာကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကိုအရွယ်အစားလိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်. စက်မှုလူမီနီယံပရိုဖိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်း၏ပုံရိုးရိုးလေးဖြစ်စဉ်တွင်…
123နောက်>...34 စာမျက်နှာ 1 ၏ 34